Xildhibaan Xidig: Dadka Soomaaliyeed shaqo la’aan ayey u dhimanayaan – Kalfadhi
Xildhibaan Xidig: Dadka Soomaaliyeed shaqo la’aan ayey u dhimanayaan
Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka ayaa hadda gacanta ku haaya Miisaaniyadda 2019-ka, oo ay Wasaaradda Maaliyaddu u gudbisay shalay Golaha Shacabka. Xildhibaanada qaar ayaa rumeysan iney Guddiga Maaliyaddu indha furan ku eegaan qeyba badan oo miisaaniyaddaas ku saabsan.
Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa dul istaagay dhibaatada shaqa la’aanta dalka, waxa uuna Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka u soojeediyey iney hubiyaan haddii ay Miisaaniyadda 2019-ka ku jirto miisaaniyad loogu talogalay shaqaale cusub.
“Miisaaniyadda cusub ee 2019 waxaa naloo sheegay ineysan ku jirin wax shaqaale cusub oo la qorayo, sidii sanadkii hore” ayuu yiri Xildhibaan Xidig. Arrintaas ayuu ku sifeeyey iney tahay culeys xad dhaaf ah. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Beyle, ayuu sheegay inuu horay ugu wargeliyey Golaha inuusan aduunka taageera Miisaaniyadda Soomaaliya ku xiray shuruudo in la sameeyo shaqaaleyn cusub.
“Caalamku gacmaha inuu ka xiro maaha Miisaaniyaddii Soomaaliya, oo aan shaqaale ku dari weyno- kuwa folantiir ahoo wasaaradaha jooga ha noqdaan ama ha noqdaan kuwa cusub oo hadda la qorayo” ayuu yiri Xildhibaan Xidig. Waxa uu sheegay iney dadka Soomaaliyeed shaqa la’aan u dhimanayaan. Waxa uu intaa ku daray in ay tahay dhbaato in miisaaniyadda cusub aysan ku jirin in shaqaalo cusub la qaadanayo. “Waxaan codsan lahaa in haddii uu jiro qodobkaas wax laga bedelo” ayuu yiri Xidig.
Xildhibaanku waxa uu ugu yeeray Wasiirka Maaliyadda inuu Baarlamaanka Soomaaliya siiyo xog ka badan tan ay Wasaaraddiisu siiso warbaahinta. Waxa uu yiri “Mudane Wasiir waxaan maqalnaa dhaqaala fara badan oo dowladda la siiyey- Midowga Yurub haka hesho, ama Bangiga Aduunka haka hesho ama IMF-ta haka hesho- waxaan u baahanahay inaad faafaahin naga siisid deeqaha dalka la keenay, sida loo bixiyey, halka laga keenay iyo meesha ay wax marayaan”.
“Midda kale wadan soo koraya ayaan nahay- waa inaan ognahay wadamada gacan na siiya ee na caawiya iyo kuwa aan na caawin. Waa inaan ognahay kuwa lacagtii ay ciidamada siinaayeen gooyey, oo dabcan diidan inaan horay u socono” ayuu Xildhibaan Xidig ku daray hadalkiisa.
“Baarlamaanku marar badan waxa uu ka hadlay, oo uu soojeediyey in ciidamada mushaar kordhin loo sameeyo. Waxaan rabaa iney guddigu hubiyaan go’aamadii horay loo gaaray iyo iney hubiyaan ciidamada miisaaniyaddaan cusub ee 2019-ka waxa ugu jira” ayuu Xildhibaanku u jeediyey Guddiga Maaliyadda ee Golaha. Gunooyinka xildhibaanadii hore iyo miisaaniyadda dowlad goboleedyada, oo sida uu sheegay aan qaarkood ka dhex muuqan miisaaniyadda, ayuu u sheegay guddiga iney hubiyaan.
Golaha Shacabka ayaa markale ka shaqeynaya Sharciga Kheyraadka iyo Maareynta Biyaha Soomaaliya